Imibuzo emi-5 ezokwenza ukuthi ukuqonde kangcono ukuqhuma kwentaba-mlilo iCalbuco | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngesonto eledlule kube nolunye lwezindaba oluzokhuluma kakhulu kulo nyaka ka-2015, ukuqhuma okungazelelwe kwe Intaba-mlilo iCabulco Eningizimu yeChile. Ngemuva kokubona izithombe ezihlaba umxhwele nezishaqisayo zentaba-mlilo isebenza, ngokuqinisekile uzokwenza kanjalo Imibuzo eminingi. Ngokulandelayo ngizozama ukukunikeza izimpendulo zemibuzo enjalo futhi ngokuqinisekile baqonde kangcono kakhulu konke okuphathelene nokuqhuma kwentaba-mlilo iCabulco.
1 Kungani ukuqhuma kungazelelwe?
2 Ukuqhuma kungahlala isikhathi esingakanani?
3 Yini engaphakathi kwentaba-mlilo iCabulco?
4 Yini engenzeka uma lina?
5 Kungenzeka yini ukuthi kuqhume intaba-mlilo i-Osorno?
Kungani ukuqhuma kungazelelwe?
Ngokusho kochwepheshe abaningi, 95% wokuqhuma zivame ukubonwa kusengaphambili ngenxa yomsindo, iphunga noma ukuqhuma okuncane. Kodwa-ke, kunama-5% wamacala lapho kungekho sixwayiso nhlobo. Lokhu yilokho okwenzeka ku- Intaba-mlilo iCalbuco.
Ukuqhuma kungahlala isikhathi esingakanani?
Ngenxa yohlobo lwentaba-mlilo, ubudala nobukhulu bayo, ukuqhuma okuqale ngoLwesithathu olwedlule kungaqhubeka isikhathi izinsuku ezimbalwa ezengeziwe futhi ngisho namasonto ambalwa.
Yini engaphakathi kwentaba-mlilo iCabulco?
Le volcano ine inani elikhulu lesilika, lokhu kubangela ukuthi udaka lube namandla kakhulu kunokujwayelekile futhi luhambe kancane kakhulu. Ngaphezu kwalokhu, inamanzi amaningi ngakho-ke ukuqhuma kuqhuma impela.
Yini engenzeka uma lina?
Uma lina kulezi zinsuku, isimo besizoba nzima ngoba ucingo belungakhiqizwa imvula eneasidi. Futhi, kuzoba nethuba elikhulu lezikhukhula kuyo yonke indawo.
Kungenzeka yini ukuthi kuqhume intaba-mlilo i-Osorno?
Ngokuya ngemibono yochwepheshe kulo mkhakha, akunakwenzeka neze ngoba ziyizintaba-mlilo ezahlukahlukene futhi azixhunyanisiwe. Ezinsukwini ezimbalwa umsebenzi uzokwehla ngamandla futhi ingozi enkulu ingavela i-alluvium.
Ngiyethemba ngikuxazulule noma ikuphi ukungabaza ekuqhumeni okushaqisayo kwentaba-mlilo yaseChile iCabulco.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Imibuzo emi-5 ezokwenza ukuthi ukuqonde kangcono ukuqhuma kwentaba-mlilo iCalbuco